XOG CUSUB:Ra’iisal Wasaare Khayre oo Khiyaanadi Ugu Xumayd Ku sameeyey Madaxweyne Farmaajo | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Si Khayre Madaxwaynaha uu donayaa u noqdo Muxuu kula soo shawray Beesha uu dhowaan u tegay ee Raxanweyn
Si RW Xasan Cali Khayre u noqdo madaxweyna Soo socda ee Soomaaliya, waxa uu kula soo shawray ama kula soo faqay in beesha Diqil iyo Mirifle ay noqdaan beesha ugu horaysa ee ku dhawaaqda in doorasha soo socota lagu qabto nidaamkii horee ee 4.5.
SI LO BADBAADIYO SAAMILEEYDA JEEGAANTA DIGIL IYO MIRIFLE, HAWIYE, DIRTA IYO SII SOCOSHADA DAWLADNIMADDA NGs s-ka, waayo beesha Daarood maamulo ayaa u dhisan doorasho cod iyo qof iyakeey faa’iido u tahay ee inooma aha waxa manta ku dhawaaqay odeyaashooKoonfur galbeed waxaan sugnaa waa Odayaasga Hawiye iyo Dirta o ku xiga.
Maxaase la gudboon beesha daarad min Badhan ilaa Kismaayo, Kenya Itoobiya taxan? ma waxay dalka marti uga ahaanayaan lugooyada jeegaanta 4,5 lagu naasnuujiyo. mise bannaanka ayey ka istaagayaan 4,5ka madaxweeyne walba yimaado villa Soomaaliya ku shaqeeyo hagarrdaameentooda iyo naasnuujinta jeegaanta 4,5ka
Farmaajo Ayaa Hada Ogaadey Inuu Raysal Wasaarahiisu Afganbinayo Safarkiisa Gobolada Dalka uu Ku Marayo,Taasi Waxay Ka Furan Weydey Inuu Booqdo Dhuusa Mareeb Kadibna Gobolada dalka Isaguna Soo Maro.
Previous articleDEG DEG:Reer Laascaanood oo Hubka Qaatay Askar Soomaliland oo Lagu Diley
Next articleDaawo:- MD Farmaajo oo soo xidhay shirkii uu dhuusamareeb kafuray RW Khayre.
Jubalander September 17, 2019 At 6:00 am
Marreexaan way ka weynaadeen qabiil lagu owr kacsado oo marka loo baahan yahay la dhaho “yaa Daarood sheet, tolbeelayeey’ Somaalidu sheekadaasi waa fahmeen, meesha halugu kala tago dadkaaga dhinac ka raaca jaalle, Somali waa Somali wallaahi in aanan kala jeclayn
mohamed warsame September 17, 2019 At 8:19 am
Hadaan ka hadlo qof shegtay jubalander
ASC,jubalander waxan garanwayey Belwenta Sade Marexaan,waxa uu uqabtay,Madaxweyne maxamed Abdullahi Maxamed oo ah ina farmajo? waxan kale oo weydin laha maxamed Abdulahi,ma nin darood ah miya mise wa nin murubsade ah? mase lahaya qof masul ah oo marexaan ah oo kala hadla wax tarxumada & Ficil la’anta.
Fanax September 17, 2019 At 2:47 pm
Jubalander sxb magaca Mareexaan maahan mid maanta lagu faano ee iska jir. Mareexaan waa wax matarayaal aad u caqli liita oo ah beesha soomaaliyeed ee loogu awr kacsi badan yahay. Haaweydaa kubadda sideeda isugu laad laadda oo ka caqli batay. Waxaa halkaa dhigay xinka OG iyo MJ oo dib jiro ka wada dhigay. Markay horumarka iyo dawladnimada noqoto eber bay taagan yihiin. Talo ma haysaanee waxaa khayrku idiin ku jiraa inaad tolkiina MJ iyo OG xinka iyo xaasidnimada ka daysaan oo is garabsataan.
Ahmed September 17, 2019 At 5:19 pm
Nimankiinan Qabyaalada uun ka hadlaya. Mareexaan waxba haka sheegina ee Xaarmaajo dhaliila. Isagaa Liita oon saxar xitaa dhulka ka qaadi Karine. Siyaad Bare sow Mareexaan ma aheyn. Xitaa Geeljirayaal habeedu weli kasoo ureyso ayuu Janano ka dhigey. Mareexaan iyo Daaroodka kaleba intii af tiqiiney Faraqyada ayay wada buixsadeen 15 Sano ee xukunkiida u danbeysay. Siduu doono Soomaalida kale ha ugu xumaado laakiinse Afweyneba Mareexaanbuu ahaa aad ku dhaadataan oo qaar badan oo idinka mid ihi weli ka samri la yihiin, sababtey diintaba.
Kolkaas Xaarmaajo weeye ninka liitaa ee maaha Mareexaan oo dhan. Qabiilka siyaasiyiin tayo leh ayaanu laheyn waayo Afweyne ayaa caameeyay oo Geeljire Miidhan geeyay meel aanu usoo tabo baran, xirfadna u laheyn. Kolkaas maba laha cid firfircoon oo hoosta ka dhisan, khibradna korodhsadey intii lakala maqnaa. Farmaajahaad ayaa ugu dhow isna wuxuusan aheyn ayuu is moodey.